Universal Online TV | पहिलेका काला मोदी कसरी भए गोरा ?? पढ्नुहोस ताइवानको च्याउको कमाल पहिलेका काला मोदी कसरी भए गोरा ?? पढ्नुहोस ताइवानको च्याउको कमाल
पहिलेका काला मोदी कसरी भए गोरा ?? पढ्नुहोस ताइवानको च्याउको कमाल
यूद्धको मैदानमा होस वा राजनीतिको मैदानमा, अन्तिम घडीसम्म आफूलाई हौसला दिने तथा दुश्मनमाथि हमला बोल्ने क्रम जारी रहन्छ ।
भारतको गुजरातमा अहिले निकै रोचक राजनीतिक लडाइँ चलिरहेको छ । र, मंगलबार यो लडाईसँग जोडिएको प्रचारको अन्तिम दिन थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सी-प्लेनमा उडान भरेर अम्बाजीको मन्दिरमा पुगे र गुजरातको विकासको कसम खाए । उनले राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सोधेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए । दुई दिग्गज नेताहरुबीच एक नौजवान नेता पनि थिए, जसले आफ्नो एक अभिव्यक्तिबाट धेरैको ध्यान आकृष्ट गरे ।
उनी नेता हुन् अल्पेश ठाकोर र विषय बन्यो ‘मसरुम’ अर्थात च्याउ । उनले चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन निकै चाखलाग्दो भाषण गरे । उनले भने, ‘मलाई एक जनाले सुनाए, मोदी जुन खानेकुरा खानुहुन्छ, त्यो तपाईं खान सक्नुहुन्न किनकी यो गरीबले खाने कुरा होइन ।’
‘मैले सोधेँ, के हो त्यो खानेकुरा ? उनले भने कि मोदी साहेब च्याउ खानुहुन्छ । त्यसपछि मैले भनेँ, यसमा अनौठो के भयो र ! च्याउ त यहाँ पनि पाइन्छ । उनले जवाफ दिए, ‘तिमीहरु जुन च्याउ खान्छौ त्यो उहाँलाई मन पर्दैन । उहाँले खाने च्याउ त ताइवानबाट आउँछ ।’
उनले अगाडि भने, ‘ताइवानबाट आउने एउटा च्याउको मूल्य ८० हजार रुपैयाँ पर्छ र मोदी साहेब हरेक दिन यस्तो पाँचवटा च्याउ खानुहुन्छ ।’
मैले सोधेँ प्रधानमन्त्री भएदेखि नै खान थाल्नुभएको हो ? उनले जवाफ दिए, होइन, मुख्यमन्त्री भएदेखि ।’
ठाकोरले भने, ‘त्यतिबेला मैले सोचेँ कि उनी पहिले म जत्तिकै काला थिए, पछि गोरा कसरी भए ? मैले ३५ वर्ष पुरानो उनको फोटो देखेको छु । उनी मजस्तै देखिन्थे ।’
‘साथीहरु बुझ्नुस्, जो प्रधानमन्त्री हरेक बिहान चार लाख रुपैयाँको र हरेक महिना एक करोड २० लाख रुपैयाँको च्याउ खान्छन्, उसलाई यो रोटी-चामल मन पर्दैन । यो केवल देखावटी हो ।’
सामाजिक सञ्जालमा रमाइलो
ठाकोरको यो भाषण सामाजिक सञ्जालका लागि राम्रै मसला बन्यो । प्रयोगकर्ताहरुले फरकफरक तस्वीर हालेर च्याउको यस विशेषतालाई रेखांकन गर्न सुरु गरे ।
के च्याउले गोरो बनाउँछ ?
च्याउ कैयौं प्रकारका हुन्छन्, जसमा केही खानलायक हुन्छन् त केही विषालु । विषालु च्याउ खाँदा पेट दुख्न र उल्टी हुन थाल्छ । केहीले त मान्छेको ज्यानै लिन पनि सक्छ ।
खानलायक च्याउमा प्रोटिन र फाइबर पर्याप्त हुन्छ । यसमा भिटामिन बी हुन्छ र सेलेनियम जस्तो शक्तिशाली एन्टीअक्सिडेन्ट पनि । यसले इम्यून सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ र सेल-टिस्यूमा हुने नोक्सानीलाई रोक्छ । कुनै च्याउ यस्ता पनि हुन्छन् जसले डीएनएमा हुने क्षतिलाई रोकेर क्यान्सरविरुद्ध पर्खाल खडा गर्छ ।
च्याउलाई यौन शक्तिवर्द्धक पनि मानिन्छ किनकी यसमा जिंक पर्याप्त मात्रमा पाइन्छ । जिंकको कारणले पुरुषहरुमा पाइने सेक्स हार्मोन टेस्टास्टेरनको मात्रा बढ्छ ।
च्याउ खाएर मान्छे गोरो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कपोलकल्पित नै मान्नुपर्छ ।
ताइवानको च्याउको कथा
अल्पेश ठाकुरले जोड दिएर भने कि नरेन्द्र मोदीले ताइवानबाट आयातित च्याउ खान्छन् भनेर उनलाई कसैले बतायो । अब जानौं, आखिर ताइवानको च्याउमा खास के छ त्यस्तो ?
एक समाचारमा बताइएअनुसार ताइवानले सबैभन्दा अगाडि केन र बटलबन्द च्याउको निर्यात नियमित व्यवसायीक आधारमा सन् १९६० मा सुरु गर्‍यो । र, १९६३ सम्म यो च्याउको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक बन्यो । त्यतिबेला संसारभर निर्यात गरिने च्याउको एक तिहाई हिस्सा ताइबानले ओगटेको थियो ।
सन् १९७८ मा ताइवानको वाषिर्क च्याउ निर्यात १२ करोड डलर पुग्यो । तर, त्यसपछि चीन र दक्षिण कोरियाका किसानले पनि च्याउ खेति गरेर ताइवानलाई चुनौति दिए । आज जापान पनि च्याउको उत्पादनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कोशिश गरिरहेको छ । तर ताइबान आज पनि सबैभन्दा बलियो खेलाडी हो ।